Pradesh News | » कर्णाली प्रतिष्ठान प्रशासनमा अनिश्चितकालिन ताला कर्णाली प्रतिष्ठान प्रशासनमा अनिश्चितकालिन ताला – Pradesh News
कर्णाली प्रतिष्ठान प्रशासनमा अनिश्चितकालिन ताला
जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको प्रशासनमा अनिश्चितकालिन ताला लागेको छ । उपकुलपति डा.राजेन्द्रराज वाग्लेले अनियमित तवरले डिन नियुक्ती गरेको भन्दै कर्मचारी कल्याणकारी समाजले अस्पताल प्रशासनमा ताला लगाएको हो । सोमबार उपकुलपति डा. वाग्लेले जनस्वास्थ्य संकायको डिन नियुक्त गरेका थिए ।
अस्पताल प्रशासनभित्र रजिष्टार, उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षको कार्यकक्ष थिए । यो सँगै अस्पतालमा सबै प्रशासनिक काम ठप्प भएका छन् । प्रतिष्ठानमा दुई वटा डिन नियुक्त भइसकेका थिए । उनीहरुलाई जनस्वास्थ्य संकायको जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्था थियो । तर बेग्लै प्रतिष्ठानको आर्थिक भार पर्ने गरी गरिएको नियुक्ती कर्णाली प्रतिष्ठानको हितमा नभएको उनीहरु बताउँछन् ।
उपकुलपति डा. वाग्लेले काठमाण्डौँ सम्पर्क कार्यालयबाट अर्को डिन नियुक्त गरेपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । कर्मचारी कल्याणकारी समाजले डिन नियुक्ती फिर्ता लैजान २४ घण्टाको समय दिएका थिए । पछिल्लो चौविस घण्टामा कुनै प्रक्रिया शुरु नभएकाले बाध्य भएर ताला लगाउनु परेको कर्मचारी कल्याणकारी समाजका अध्यक्ष रामाकान्त उपाध्यायले जानकारी दिए । कर्मचारी समाजले प्रतिष्ठानमा भइरहेको डिन नियुक्ती लगायतको फर्जि कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा भइरहेको अनियमितता बिरुद्दको आन्दोलनमा साथ दिन जुम्लाबासीलाई आग्रह गरेको छ । उपकुलपति डा. वाग्लेले डिन नियुक्तीका बिषयमा जिम्मेवार नभएको आरोप समेत लगाइएको छ ।